Ezinụlọ na agbamakwụkwọ
Terracina - isi obodo Riviera di Ulysses nke dị n'Ịtali dị n'ụsọ oké osimiri Oké Osimiri Tyrrhenian ma nwee akụkọ ihe mere eme n'oge ochie: obodo ahụ malitere na narị afọ itoolu BC.
Dị ka ebe Terracina dị n'Ịtali bụ ụwa a ma ama maka ọgwụgwọ ya, ikuku ikuku iodine. Osimiri aja, ogologo ogologo nke ihe karịrị 15 kilomita, na-eju anya na ejiji ha, na mmiri ọdọ mmiri - nghọta kristal. Mpaghara uzo mara mma nke di na Terracina: oke dunes delu, ugwu di elu, ihe ndi ozo. Enwe njem ezumike gụnyere mmiri mmiri, ski mmiri. N'ime osimiri dị iche iche, e nwere ebe ndị a kwadebere nke ọma, e nwere ụlọ ọrụ mgbazinye maka ngwá egwuregwu na ụgbọ mmiri. N'akuku ụsọ oké osimiri nke Terracina e nwere ọtụtụ ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ụlọ dị mma, ụlọ oriri na nkwari abalị nke oge a.
Ihu na Terracina
Terracina maara maka na ọ bụ n'ebe a nke ụsọ oké osimiri Tyrrhenian na e nwere ụbọchị anwụ na-acha kwa afọ na mmiri ozuzo kwa afọ dị ala karịa ala mba. Oge igwu mmiri n'oge ahụ na ebe dị jụụ Mediterranean na-adị site na May ruo October.
Ịnọ na Terracina ị nwere ike ịhọrọ ebe obibi dị ala nke dịgasị iche iche, obere ụlọ na ụdị ụlọ ezumike dị n'ụsọ oké osimiri. Ọtụtụ hotels na-adị n'ụsọ osimiri ma ọ bụ na nso ya ma nwee oke osimiri ha.
Italy: njem nleta na Terracina
Otu n'ime aha uri bụ Terracina bụ ala akụkọ ifo. Ọtụtụ oge ochie ndị Roman na Hellenic; ihe ndị a kọwara na Bible jikọtara ya na ụsọ oké osimiri Tyrrhenian. Na n'okporo ámá nke ochie nke obodo - Upper Terracina, ụlọ ndị e chebere na-abịa n'oge oge Alaeze Ukwu Rom, yana ụlọ ndị a na-echekwa n'oge ochie.
Ụlọ nsọ Jupita
Ụlọ nsọ nke Jupita na Terracina bụ ihe ncheta oge ochie, ihe ochie ochie nke Etruscan malite na narị afọ nke anọ BC. Ụlọ ahụ dị n'ugwu Sant'Angelo na elu 230 m n'elu larịị.
Katidral nke Saint Cesarea
E wughachiri katidral nke St. Cesaria, onye nlekọta nke Terracina, ma doo ya nsọ na narị afọ nke 11, mgbe e mesịrị, a gbakwunyere ụlọ elu na mgbidi ụlọ ahụ. N'ime katidral ahụ, e nwere nnukwu mmiri na-ekpo ọkụ, nke a na-ejikwa osisi ndị mara mma. N'akuku katidral bụ ụlọ ndị dị n'oge ochie: Ụlọ Bishọp, Venditti Castle na Rose Tower. Ọnọdụ elu igwe nke Upper Terracina na-enye gị ohere inwe mmetụta dị ka onye njem n'oge, daba n'ime oge gara aga.
Miami Beach Water Park
Na nso Terracina bụ nnukwu ogige ntụrụndụ Miami Beach. Na mmiri nke 10000 m2 enwere ntụrụndụ nke ọ bụla uto: slides, ebe nkiri maka ụmụaka na ndị okenye, ọdọ mmiri hydromassage.
Njem site na Terracina
N'elu ụgbọ mmiri ị nwere ike iru Pontine Islands - ebe ndị patricia Rom chọrọ ka ha zuo ike. Na agwaetiti Wenton, nke bụ akụkụ nke agwaetiti ahụ, e nwere ebe mmiri na-agba mmiri. N'ebe a, ị nwere ike ịbanye n'ime oké osimiri, na ụgbọ mmiri ndị na-asọ oyi, na ọdọ mmiri ahụ na ubi ndị nwere coral na ọtụtụ ndị bi na ya. Ọzọkwa, ọ ga-ekwe omume ime ka mmiri na-adọrọ mmasị ọ bụghị naanị n'ụbọchị, kamakwa n'abalị.
Circleo National Park
A na-ewere Circa National Park, nke dị na Zannon Island, dị ka paradaịs nnụnụ. Ọtụtụ nnụnụ na-agagharị agafere ebe a, gụnyere flamingos, cranes, na ugo na-acha ọcha.
A na-eme njem njem site na Terracina na obodo ndị dị nso obodo Italy: Pompeii , Naples , Rome na obere obodo ndị dị na Lazio.
Visa mba na Germany
Ụtụ isi na Germany
Osimiri nke Croatia
Ememe ezumike na China
Chọọchị Katọlik na Moscow
Macau ebe nkiri
Ebee ka Pamukkale nọ?
Thailand ma obu Goa?
Gịnị ga-esi na Spain?
Hungary - ebe nkiri
San Remo - nkiri
Mmiri Egwu Raduzhny, Cherepovets
Ụmụnna Kim Kardashian na Kendall Jenner gara zụọ ahịa na ụlọ ahịa azụmahịa nke New York
Stool maka nri IKEA
Ọrịa na-egbu oge n'ime ime
Ntucha nke cinnamon - Ezi ntụziaka
Uwe a na-ete ime akwa
Mousse achịcha - echiche ndị mbụ maka ịme anụ ụtọ magburu onwe ya
22 echiche dị mma maka ice cream
Ọrịa ọrịa shuga
Turquoise na-ekpuchi n'ime ime
Nchọpụta nke anesthetizing
Dimexide maka ntutu - olee otú ọgwụ na-esi emetụta curls?
Aura Keskus Water Park
Olee otú ịkwụsị ịhụ mmadụ n'anya, ọ bụghị ịta ahụhụ ma hapụ?
Egwuregwu ụrọ maka ihu
Kedu ihe ị ga-eji mee mkparịta ụka?
Mgbochi na ulo - esi tufuo?
Akpanwụ mgbe ọnye embrayo gasịrị
Jiri aka aka gi dozie ya
Kedu ihe iji radish na-acha ọcha?
© 2021 ig.tierient.com